Sidee baan ka Patriot Memory Card soo ceshano karaa Data?
1 Sidee baan ka Patriot Memory Card soo ceshano karaa Data?
My dhibaato waa in carruurteyda ayaa tirtiray qaar ka mid ah sawirrada ka camera digital, kuwaas oo ku yiil mooyee card Patriot SDHC ah. Maxaa ka xun yahay in aanan mar si ay u gudbiyaan sawirro kuwa si aan computer leeyihiin. Sidaas waxaan la yaabanahay hadii ay macquul tahay ii soo ceshano ee photos tirtiray ka card Patriot SDHC. Anigu ma aan isticmaalo kaarka tan iyo markaas. Thanks.
Nasiib wanaag aad u sheegay in aan isticmaalo kaarkaaga Patriot SDHC tan iyo sawirrada ayaa lagu tirtiray. Tani waxay ka dhigan tahay suurtogalnimada ah in aad dib u helida aad sawiro lumay waa run ahaantii weyn. Maxaa yeelay, inta photos tirtiray aan la overwritten by xogta cusub ee kaarka Patriot SDHC, waxaad si fudud dib iyaga ka heli kartaa.
Si aad u soo kabsado xogta laga kaadhka xusuusta Patriot, waxaan idin ​​kula talin lahaa utility ah soo kabashada xogta: Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac . Qalabkani waxa uu u qabata Patriot kabashada kaadhka xusuusta in hab fudud oo degdeg ah. Iyada oo taageero u ah, waxaad awoodi doontaa inaad dib u soo ceshano kala duwan oo xogta laga badiyay, tirtiray, formatted ama xataa laga aad kaadhka xusuusta Patriot, sida sawiro, document files, files archive, videos, Cajalado, iwm Tani kabashada xogta si degdeg ah oo sax ah qalab si buuxda u la jaan qaada card Patriot SD, kaarka XD, kaarka MMC, kaarka SDHC, kaarka CF, iwm
Hel version tijaabo ah Wondershare Data Recovery ee si xor ah u soo kabsado xogta laga kaadhka xusuusta Patriot hadda!
2 User Guide of Patriot Memory Card Data Recovery
Tallaabada 1 Daahfurka Wondershare Data Recovery iyo Select Mode Recovery inay bilow
Sida aad ka arki kartaa image hoose, aad arki doonaa 3 hababka soo kabashada ee interface bilaabin barnaamijka ka.
Aan dooro "lumay Recovery File" hab ay dib u hanato files lumay ama la tirtiro ka kaadhka xusuusta Patriot.
Fiiro gaar ah: Haddii "lumay Recovery File" ma la kulmaan aad looga baahan yahay, waxa kale oo aad isku dayi kartaa oo kale ah qaabab badan. Just oo aqrinaya warbixinnada soo faahfaahsan oo iyaga ka mid ah si taxadar leh.
Tallaabada 2 baarista Patriot Memory Card u Khasaaray Files
Hadda Wondershare Data Recovery muujin doonaa dhammaan cajaladaha adag ogaado on your computer. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan warqad drive ee aad kaadhka xusuusta Patriot oo guji "Start Scan" inaad raadiso files lumay.
Fiiro gaar ah: Fadlan hubi in aad kaadhka xusuusta Patriot in si wanaagsan loo-xiran karo your computer.
Tallaabada 3 ceshano Xogta laga Patriot Memory Card
Marka scan la dhammeeyo, waxaad ka arki kartaa magacyada file si aad u hubiso in faylasha aad tirtiray ayaa laga helay ama aan. Dooranaysaa faylasha aad doonaysid in aad dib u soo ceshano oo guji "Ladnaansho" inuu ka soo kabsado files tirtiray ka kaadhka xusuusta Patriot
Fiiro gaar ah: Ammaanka soo kabashada, waxaa dhaanta inay sii faylasha recoverable si aad u computer ama qalab lagu keydiyo oo cusub.
Top 5 SD FREE software kabashada card
> Resource > Memory Card > Guide Easy ee Patriot Memory Card Recovery